Ntak emi Họrọ Anyị? - Shandong Chenan Machinery Co., Ltd
Ebu / Nlereanya nhazi Center
Sanwichi Panel nhazi Center
3D ngwakọ machining Centers
1.Professional R & D otu: nwere di iche iche ọkachamara engineer, nwere ike chepụta na-emepụta 5 axis CNC igwe, RV mejupụtara ogwe nhazi center, nnukwu ebu CNC center na ndị ọzọ na elu-ọgwụgwụ omenala ngwá.
2.Powerful machining ike: Anyị nwere USA HASS Vetikal machining Center, USA HASS kwụ machining Center, Taiwan AWEA Gantry Ise Face machining Center, di iche iche nke na-agwụ ike igwe na igwe. Ihe karịrị afọ 20 machining ahụmahụ iji hụ na àgwà na nkenke nke niile n'ibu akụkụ ahụ mapụtara;
3.Advanced ule akụrụngwa: Anyị mbubata UK RENISHAW ika laser interferometer / USA ndú ika ahazi ji atụ igwe / UK RENISHAW ika ballbar usoro, nke Laser autocollimator / Optical ihu Finder pịa nlele, Ịkpọ oku egosi / square igbe / marble square igbe na-eme mkpuchi eguzogide ederede / ala-eguzogide ule / mgbali ule, iji jide n'aka na ihe niile igwe na nke zuru okè arụmọrụ tupu nnyefe.
4,24 awa online mgbe-ọrụ na processional mgbe-ọrụ otu egwuregwu, ịza ahịa si ajụjụ adọ.
Ekwentị: + 86-534-899-7238
© Copyright - 2018 All Rights echekwabara.